| Dot Property
Myanmar property for sale
စီးပွားေ၇းဆိုင်၇ာ အိမ်ခြံမြေေ၇ာင်း၇န်
အိမ်ခြံမြေေ၇ာင်း၇န် တင်ပါ
Myanmar property for rent
သင်၏ အိမ်ခြံမြေေ၇ာင်း၇န်
သင်၏ အိမ်ခြံမြေ အငှား စာ၇င်း
အိပ်ယာနှင့် စီမံကိန်း အသစ်များ
Myanmar စီးပွားေ၇းဆိုင်၇ာ အိမ်ခြံမြေ
စီးပွားေ၇းဆိုင်၇ာ အိမ်ခြံမြေ ခွင့်ပြုသည်။
၇ုံးခန်း နေ၇ အတွက် ငှားရန်
စီးပွား ဖြစ် ငှားရန်
ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေ စခန်းေ၇ာင်း၇န်
စီးပွားေ၇းဆိုင်၇ာ အဆောက်အဦး အကြောင်းအ၇ာ။
နိုင်ငံခြား တွင် အိမ်၇ှာ၇န်။
ပူးပေါငျး OR ဆိုငျးအငျလုပျခွငျး
မျှဝေမည် သိမ်းပါ တောင်းဆိုမှုအသေးစိတ်များ
ကွန်ဒိုများ အတွက် ရောင်းရန်
2 အိပ်ခန်းများ ကွန်ဒို ရောငျးခခြွငျးသို့မဟုတျငှား အတွင်း Yangon
တိုက်ခန်းအငှားနှင့် အရောင်း (ID-132)
Sale: Lks 1,450
Rent: Lks 10 / လ
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 132
ငှားရန်နှင့် ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်းမှာ - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ စံပြဆေးရုံနှင့် မလိခအိမ်ရာများသို့ သွားရောက်ရန်နီးသောနေရာ၌တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခန်းအကျယ်မှာ - ၁၃၇၅စတုရန်းပေရှိပြီး ၊ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အငှားဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၁၀၀၀
အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၄၅၀
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 581 other listings.
Similar properties ရောင်းရန်
Other searches in Yangon
ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Yangon
ရောငျးရနျကှနျဒို အတွင်း Yangon
ရောင်းရန်အိမ် အတွင်း Yangon
စီးပွားေ၇းဆိုင်၇ာ အိမ်ခြံမြေေ၇ာင်း၇န် အတွင်း Yangon
ရောင်းရန်မြေ အတွင်း Yangon
ငှားရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Yangon
ငှားကှနျဒို အတွင်း Yangon
ငှားမွို့တှငျးစုပေါငျး အတွင်း Yangon
ငှားရန်အိမ် အတွင်း Yangon
ငှားစီးပှားဖွဈအိမျခွံမွေ အတွင်း Yangon
၇ုံးခန်း နေ၇ အတွက် ငှားရန် အတွင်း Yangon
ဤပရောဂျက်ကို အိန်ဂျယ် အိမ်၊ခြံ၊ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း The information contained in this listing formsaproperty advertisement of which dotproperty.com.mm has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty.com.mm cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
ကျွန်ုပ်ကိုသတိရပါ သင်၏စကားဝှက်ကို မေ့သွားပြီလား?
ကျွန်ုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်မှုဈေးကွက် အသစ်တင်ခြင်းများနှင့် ကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်း သတင်းပေးပါ။
စာရင်းသွင်းမည်ကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ (here must be what we have to agree) ကို သဘောတူသည်။ လုံခြုံမှုပေါ်လစီ
စာရင်းသွင်းမည်ကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ (here must be what we have to agree) ကို သဘောတူသည်။ အခေါ်အဝေါ်များနှင့် အခြေအနေများ
Already have an account? လော့ဂ်အင်
သင်၏အကောင့်စကားဝှက်ကို ပြန်လည်သတ်မှန်ရန် သင်၏အီးမေးလ်ကို အောက်တွင်ရိုက်ထည့်ပါ။ သင်၏အကောင့်စကားဝှက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ဤအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အတည်ပြုအီးမေးလ် ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အီးမေးလ်ကို မရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဂျန့်ခ်ဖိုဒါကို စစ်ဆေးပါ ပြီးလျှင်/ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို info@dotproperty.com.mm
Thailand (EN) Thailand (TH) Philippines Vietnam Cambodia Laos Singapore Malaysia Indonesia Hong Kong
ဒေါ့ပရော်ပါတီအဖွဲ့ ဒေါ့ပရော်ပါတီ နိုင်ငံတကာ Dot Expo ဒေါ့မီဒီယာအဖွဲ့